Chirungu Semutauro Wechipiri (ESL) kuHodges University
Categories: Chirungu Semutauro Wechipiri, Featured
Tsvaga yako nzira yekubudirira needu ESL Chirongwa!
Ichi chitupa chirongwa chakagadzirirwa kupa Chirungu semutauro wechipiri (ESL) kuraira ku kuvandudza wako aripo Ruzivo, kudzidza, uye hunyanzvi hwebasa apo Chirungu kwete chizvarwa chako mutauro. Pamusoro pezvo, chirongwa chechitupa chinogona kuwedzera kugona kwako taurirana neChirungu uye tevera basa or koreji mikana muUnited States.
Chirongwa ichi chinotarisa mukusimudzira nekuvandudza girama, kuverenga, kunyora, kuteerera uye kutaura Unyanzvi, uye kunzwisisa. Pamusoro pezvo, kudzidza kwakabatsirwa nemakomputa kunosimbisa kudzidza kwako mutauro weChirungu uye hunyanzvi hwe software.
Ese makirasi eESL anowanikwa kuburikidza neyedu epamhepo Technology Enhanced Classroom (TEC) fomati. Iine TEC inogoneswa, izvozvi zvave kuita kuti utore chako Chirungu chitupa kubva kunyaradzo yeimba yako.
Degree Chirongwa Kutsvaga
Chirungu SeMutauro Wechipiri (ESL) Nhoroondo
Ndekupi Kwaunogona Kutora ESL?
Hodges inopa ESL kosi kuFort Myers kambasi kubva 8:30 am - 1:20 pm Muvhuro kusvika China.
Makosi matatu-Svondo-Svondo Matanho
Grammar (Matanho 1-3)
Kuverenga / Kunyora (Matanho 1-3)
Kuteerera / Kutaura (Matanho 1-3)
Zvinodiwa zveKubvuma Kune ESL Zvirongwa:
Vanyoreri vanofanirwa kuve nediploma yechikoro chepamusoro kana GED.
Vanyoreri vanofanirwa kuve nemamiriro epamutemo ekurarama uye / kana kudzidza muUnited States kune yedu-yemunhu kosi.
Vanyoreri vanofanirwa kuve vangangoita makore gumi nemashanu ekuberekwa.
Vanyoreri vanofanira kuzadza ESL Munyoreri Chikumbiro fomu, iyo inoshandiswa kuona kukodzera kunyoresa muchirongwa.
Mari Yekubatsira inowanikwa Mahara 1-3 evadzidzi vanokodzera. Taura ne Admissions Coordinator kuti uone kana iwe uchikodzera rubatsiro rwemari.
* Ndokumbira utarise, vadzidzi vepasirese vane F-1 vhiza vanoteedzera iyo ESL chirongwa vanofanirwa kuenda kumakirasi pamusasa.
Koreji Gadzirira Chirungu Mashoko
Koreji Kugadzirira Chirungu
Iyo noncredit koreji yekugadzirira Chirungu kosi inopihwawo padanho repamberi. Iyi kosi yakagadzirirwa kupa chirungu mutauro kurairirwa kune vepamberi vadzidzi veChirungu avo vari kugadzirira koreji kana vanoda kuwedzera ruzivo rwavo rwechirungu Chirungu zvehunyanzvi zvinangwa
Imwe ye16-Svondo Yakabatanidzwa Unyanzvi Kosi
Kuverenga, Kunyora, uye Grammar (Chikamu 4)
Ndekupi Kwaunogona Kutora Koreji Gadzirira Chirungu?
Hodges inopa kosi yeKoreji yekugadzirira Chirungu kuFort Myers kambasi kubva 8:30 am - 1:00 pm Muvhuro kusvika China.
Yakanyanya Chirungu Chirongwa Bhiriji
Iyo Inotungamira Chirungu Chirongwa Bhiriji rakagadzirirwa avo vanoda kurairirwa kweChirungu mutauro kuti vatevedze degree paHodges University. Chirongwa ichi chinopa vadzidzi vane mutauro wavo kwete Chirungu an yakasimba nzira izvo yakagadzirirwa kukugadzirira iwe kuverenga, kunyora, uye kushandisa girama uye mazwi. Chirongwa chedu chinodzidziswa nevadzidzisi veESL vanopa maitiro akawandisa mukunzwisisa uye kushandisa koreji-chikamu zvinhu.
Iyo 12-kiredhiti kosi inopihwa padanho repamberi rehunyanzvi hweChirungu, yakatarwa pakutora iyo HU Yekupinda Bvunzo. Kosi yemavhiki gumi nematanhatu inopihwa kumisasa yeFort Myers neNaples.
Ndekupi Kwaungaenda Nekunzwisisa Chirungu?
Intensive Chirungu Chekugamuchira Zvinodikanwa:
Vanyoreri vanofanirwa kuve nemamiriro epamutemo ekurarama uye / kana kudzidza muUnited States.
Rubatsiro rwemari ruripo kune vadzidzi vanokodzera.
Bata Admissions mamwe mashoko.
Johnny Dorrine, BB & T Mushandi uye Vakapedza kudzidza kweHodges ESL uye Bhizinesi Administration Zvirongwa
"Nekuda kweiyo Chirungu Chirongwa Chirongwa kuHodges, ndakakwanisa kufambira mberi kuburikidza nemakirasi eESL, Bachelor's in Business Administration, uye kuenda kubasa rinogutsa kubhengi kuBB & T."